UThixo uTshintshile kwaye u-Immanent? Kunokwenzeka njani loo nto?
Unqulo & Umoya Izikolo kunye neeNkqubo
Ulwalamano lukaThixo kwindalo?
Ekubeni ubuso babo, iimpawu zokugqithiseleka kunye ne-immanence zibonakala zingqubana. Ogqithiseleyo ngumntu ongenakuqonda, ozimeleyo kwindalo yonke, kunye "nezinye" ngokuthe xa kuthelekiswa nathi. Akukho ndawo yokuthelekisa, akukho namanqaku aqhelekileyo. Ngokwahlukileyo, uThixo ongumntu omnye okhoyo ngaphakathi-ngaphakathi kwethu, kwindalo yonke, njl. -nje ke, kakhulu inxalenye yobukho bethu.
Kukho zonke iintlobo zezinto eziqhelekileyo kunye neengongoma zokuthelekisa. Ziyakwenza njani ezi mpawu zimbini kunye?
Imvelaphi yokuTshintsho kunye neNdalo
Iingcamango zikaThixo ogqithisileyo zityhutyhile ebuYuda nakwifilosofi ye-Neoplatonic. UmTestamente Endala, umzekelo, urekhoda ukukhutshwa kwezithixo, kwaye oku kungachazwa njengomzamo wokugxininisa "ubunye" bukaThixo obungenakumelelwa ngokomzimba. Kulo mongo, uThixo ungeyena umfama ngokungekho mpela ukuba kukuphosakele ukuzama ukuyichaza nayiphi na uhlobo lwefashini. Ifilosofi ye-Neoplatonic, ngendlela efanayo, igxininisa ingcamango yokuba uThixo ucocekile kwaye uphelele kangangokuba uphelele ngokupheleleyo zonke iindidi zethu, iingcamango kunye neengcamango.
Iingcamango zikaThixo onokuthi ziyakwazi ukulandelwa kwaYuda nakwezinye izazi zefilosofi zamaGrike. Amaninzi amaninzi eTestamente Endala abonisa uThixo osebenza kakhulu kwimicimbi yabantu kunye nokusebenza kwendalo yonke.
AmaKristu, ngokukhethekileyo amangalelo, ahlala echaza uThixo osebenza ngaphakathi kwabo kunye nobungqina bakhe obunokukubona ngokukhawuleza nangomntu. Abafilosofi abahlukahlukeneyo baseGrike baye baxubusha ingcamango yokuba uThixo unxulumene ngandlela-thile nemiphefumlo yethu, ukuze le nyunyana iqondwe kwaye iqondwe ngabo bafunda nokufunda ngokwaneleyo.
Iingcamango zikaThixo ezigqithiseleyo ziqhelekileyo xa kuziwa kwizithethe ezingqalileyo kwiinkonzo ezahlukeneyo. Ama-Mystics afuna umanyano okanye ubuncinci baqhagamshelana noThixo bafuna uThixo ogqithiseleyo - uThixo "onye" ngokupheleleyo kwaye ahluke ngokupheleleyo kwizinto esizifumanayo ukuba indlela ekhethekileyo yamava kunye neembono ziyadingeka.
UThixo onjalo akayikho imiphefumlo ebomini, kungenjalo ukuqeqeshwa okungaqhelekanga kunye namava angaqondakaliyo akuyomfuneko ukuba afunde ngoThixo. Enyanisweni, amava amacandelo ngokwawo ngokubanzi achazwa ngokuthi "ahamba phambili" kwaye akangeniswa kwiindidi eziqhelekileyo zokucinga kunye nolwimi oluya kuvumela ukuba abo bazalwana baxelelwe ngabanye.
Kucacile ukuba kukho ukungqubana phakathi kwezi zimbini. Ngokugqithiseleyo ukugqithisela kukaThixo kugxininiswe, ukungafani kukaThixo kunokungaqondakali kunye nentsingiselo. Ngenxa yoko, abaninzi abafilosofi baye bazama ukuphazamisa okanye ukukhanyela enye into okanye enye. Ngokomzekelo, i-Kierkegaard, igxininisekile ekugqibeleni kukaThixo kwaye yamgatya ukuxhamla kukaThixo, Oku kuye kwaba yinto eqhelekileyo kubafundi abaninzi bezesayensi.
Ukunyuka kwelinye icala, sifumana umfundisi weProtestanti uPaul Tillich kunye nalabo baye balandela umzekelo wakhe ekuchazeni uThixo njengento " eyona nto ixhalabele ngayo ", ukuze 'singamazi' uThixo ngaphandle 'kokuthatha inxaxheba' kuThixo.
Lo unguThixo ongeyena mnye ongenakugqithiselwa ngokupheleleyo - ukuba ngokwenene, uThixo onjalo unokuchazwa njengongaphelelanga.
Imfuno yeempawu zombini iyakubonakala kwezinye iimpawu eziqhelekileyo ezibhekiswe kuThixo. Ukuba uThixo ungumntu kwaye usebenza kwimbali yomntu, oko kuya kusengqiqweni ukuba singakwazi ukuqonda nokuthetha noThixo. Ngaphezu koko, ukuba uThixo akapheli, uThixo kufuneka ahlale kuyo yonke indawo-kuquka phakathi kwethu nakwiyendalo yonke. UThixo onjalo kufuneka abe ngumntu.
Ngakolunye uhlangothi, ukuba uThixo uphelele ngokupheleleyo ngaphaya kwamava kunye nokuqonda, ngoko uThixo makabe esedlula. Ukuba uThixo akapheli ixesha (ngaphandle kwexesha kunye nendawo) kwaye akaguquguquki, ngoko uThixo akanakukwazi ukuhlala ephakathi kwethu, izinto ezidlulileyo. UThixo onjalo kufuneka abe "omnye," ngokugqithiseleyo kuyo yonke into esiyayaziyo.
Ngenxa yokuba zombini ezi zimpawu zilandela ngokukhawuleza kwezinye iimpawu, kunzima ukushiya ngaphandle kokufuna ukushiya okanye ubuncinane ukuguqula ezinye izinto ezifanayo zikaThixo. Abanye abafundisi benkolo kunye nabafilosofi baye bazimisele ukwenza olo hlobo, kodwa ininzi ayinayo-kwaye umphumo ukuqhubekwa kwezi zibini, zihlala zixhatshazwa.
Ukufana Phakathi kobuKrestu nobuTshabi
UThixo Uyaziphi I-Omniscient?
Inkcazo eSebenzayo yeNkolo
Ngaba Ama-atheists aya Ecaweni?
Iminyaka eyi-15 yeGanesha Milk Miracle
Iimnandi malunga neMistletoe
UNorse uThixo uHodr
U-Ciara Ufihlelo Lwemfihlo-Utshintsho lomsebenzi
Ngubani Oye Waxhaswa?
Yintoni i-Sutra eBuddhism?
Ngaba AmaKristu Kufanele Afunde "UHarter Potter?"
Ulungelelaniso kunye namaCandelo alandelayo
Yintoni i-Inference kwiArguments?
Les Contes d'Hoffmann Synopsis
Inkcazo yekota yeBuddhist: Tripitaka
Ubusazi? - Ziyolise iMemistry Facts
Vietnam Facts, History and Profile
Indlela yokubeka iinjongo zeKholeji
I-Latin America: Imfazwe yebhola
Yintoni i-IEP? IsiCwangciso seNkqubo yoLuntu lwaBanye abafundi
Imvelaphi yeSuku yeSikhumbuzo
UMthetho kaMendel woNyulwa
10 Actinium Facts
Izinto Ezi-11 Azingenakuzazi Ngayo I-Super Bowl
I-Anatomy yenhliziyo: IiValves
U-Lucy Parsons: Uqhelwano lomsebenzi kunye no-Anarchist, uMsunguli we-IWW
Imbali ye-Steam Engines
Konke malunga ne-Adobe-Ezinzileyo kunye neGesi elinamandla
Imizekelo ye-Visual Rhetoric: Ukusetyenziswa kweZithombe eziPhukisayo
Kutheni i-Sailors ifa - Isifundo esibalulekileyo kunokhuseleko
Iibhokisi zeNqununu zeZigqeba